ढाका घटना : बन्धक बनाइएका २० जनाको हत्या | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← डाक्टर पेशाको सेतो बस्त्र भित्र लुकेका नक्कली प्रमाणपत्र धारीहरू।
स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ ? झिटीगुन्टा आदेशमा भएको तीन परिर्वतन जान्नुस् →
असार १८, २०७३- बंगलादेशको ढाकास्थित एक रेष्टुरेन्टमा बन्धक बनाइएका २० जनाको हत्या भएको सरकारले जनाएको छ । शुक्रबार बन्धुकधारीको समूहले रेष्टुरेन्ट छिरेर ग्राहकहरुलाई बन्धक बनाएका थिए । इस्लामिक स्टेटले घटनाको जिम्मेवारी लिएको छ । ढाकास्थित होले आर्टिसन बेकरी क्याफेमा बन्दुकधारी छिरेर नियन्त्रणमा लिएको १२ घण्टापछि ढाका प्रहरीले कारबाही थालेको थियो ।
बन्धक बनाउनेमध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको र एक जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको सरकार प्रवक्ताले जनाएका छन् । बन्धक बनाइएकामध्ये केही जापानी र श्रीलंकाली नागरिक थिए ।बन्धकमा पर्नेहरुमध्ये अधिकांश मुस्लिम हुन् र उनीहरु रमजान ब्रत तोड्न रेष्टुरेन्टमा भेला भएका थिए ।
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले घटनालाई घृणित भनी टिप्पणी गरेकी छन् । ‘आक्रमणकारीहरु कस्ता मुस्लिम हुन् ? उनीहरुको कुनै धर्म छैन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्,‘सरकार बंगलादेशबाट आतंकवाद सिध्याउन प्रतिबद्ध छ । ’
आर्मी ब्रिगेडियर जेनेरल नाइम असरफ चौधरीका अनुसार बन्धक बनाइएकामध्ये १३ जनालाई सुरक्षाकर्मीले उद्दार गरेको छ । तिमध्ये एक जापानी नागरिक र दुई श्रीलंकाली नागरिक छन् ।
चौधरीले बन्धक बनाइएकाहरुलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
बंगलबादेशबाट प्रकाशित हुने डेजी स्टार पत्रिकाका अनुसार बन्धुकधारीहरुले बन्धक बनाइएकाहरुलाई कुरान श्लोक भन्न लगाएका थिए । श्लोक भन्न नसक्नेहरुलाई उनीहरुले यातना दिएको पत्रिकाले लेखेको छ ।
बन्धुकधारीले बंगलादेशी नागरिकलाई मात्रै खानेकुरा दिएका थिए, डेली स्टारले लेखेको छ ।बन्धुकधारीले रेष्टुरेन्ट नियन्त्रणमा लिने क्रममा भित्रै रहेका सुपरभाइजर सुमोन रेजाले उनी छतमा चढेर त्यहाँबाट भागेको बताए ।
‘उनीहरुले बिष्फोट गराउँदा पूरै भवन हल्लिएको थियो,’ उनलाई उद्दृत गर्दै बंगलादेशका मिडियाले लेखेका छन् । उनले आफू छतबाट हाम्फालेर भागेको बताए ।